Lalao Ravalomanana tao Bongolava : hitondra ny anjara birikiko amin’ny fireneko aho – MyDago.com aime Madagascar
Tsy latsa-danja amin’ireo faritra notsidihan’i Neny iny faritra Bongolava iny. Tomefy olona ary nangorom-potsy ny vahoaka tao an-tampon-tanànan’I Tsiroanomandidy androany tamin’ny fitsenana ny delegasiona notarihan-dRamatoa Lalao Ravalomanana , nahitana ihany koa ny Praiministra Lefitra Botozaza Pierrot, ny filoha lefitry ny filankevitra ambonin’ny tetezamita Hanitra Razafimanantsoa, ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga, ny minisitry ny varotra Olga Ramalason, ny minisitry ny fiompiana Ihanta Randriamanjato, ny mpikambana ao anatin’ny CST sy CT vitsivitsy .Niresaka mivantana tamin’ny vahoaka tao amin’ny CAPJ ny tenany. Misaotra anareo hoy izy nitondra am-bavaka anay mianakavy. Nanafatra ihany koa i Dada hoy izy hoe : mandram-pihaona ary mivavaha ka aza mitsahatra fa ny vavaka no manova zavatra. Rehefa nijery ny manodidina aho hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana dia nahatsapa ny zavatra nanjo ny Malagasy. Tsy nanaiky aho hoy izy raha tsy tonga teto Madagasikara ary vonona aho ny hitondra ny anjara birikiko. Manana fon-dreny ary lasa ny eritreritro hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana hoe : Inona no azoko ataoko hamonjeko ny fireneko ? Nahita ny tsy fandriampahalemana ny tenako, mafy ny nanjo ny Malagasy, ary rehefa nijery ny tanora ny tenako hoy izy hoe ahoana ny hoaviny. Rehefa nijery ny raim-pianakaviana dia hoe ahoana ny hoaviny. Izay no nahatonga ahy handray fanapahankevitra hoy izy. Vonona aho hanome ny zavatra tsara ho an’ny fireneko ary izay hoy izy dia tsy adidiko izaho samy irery fa adidiko izaho sy ianao. Noho izany hoy I Neny dia ilaina ny firaisankina, ny fifamelana, fa isika dia firenena iray, misy tombontsoa iray. Neny hoy izy dia tsy manilika ny zanany ary Neny dia mandamina ny ankohonany. Manampy amin’ny fampandehanan-draharaha ao an-tokantrano. Izany rehetra izany hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana dia zavatra ara-nofo fa tokony hijery ny ara-panahy araka ny fitenin’ny Ntaolo hoe: ny fanahy no maha olona isika. Mino fotsiny ihany hoy izy.
7 pensées sur “Lalao Ravalomanana tao Bongolava : hitondra ny anjara birikiko amin’ny fireneko aho”
Tsy mila manao fampielezan-kevitra akory raha izao no fandehany koh!!!
Fanazavana angaha no atao misimisy @ FISANDOHANA sy LAINGA samihafa.
Tsisy fika e!!!izay aleha rehetra MAMIRAPIRATRA!!!!
Aiza ho aiza moa ity Bongolava ry zareo fa tena tsy tadidiko intsony ???afa-baraka nefa dia malaza be io toerana io.
Iny andrefana afovoany iny, ranambavy an!Morafenobe ireny angamba toa izy raha tsy diso aho.
Afovoany andrefana marina , mitohy @’iny fitsidian’i Neny iny izany??
Izay vao tadidiko!!
21 juin 2013 à 22 h 43 min
Tandremo sao very any Bongolava any Neny ary an!
« Vonona aho hanome ny zavatra tsara ho an’ny fireneko ary izay hoy izy dia tsy adidiko izaho samy irery fa adidiko izaho sy ianao »
Io indray ilay teny filamatra sy tokony atao andry (tsy ilay bitro-voalavo an) @ fampielazan-kevitra sy @ tetik’asa. Manao anao 100% na dia tsy miditra @ ilay ny vavaka manoca zavatra aza. Amiko dia ny fandinihana lalina sy ny fisainana matotra ary ny asa no manova zavatra…Na izany na tsy izany anefa dia tena mbola resy lahatra t@ asa vitan’i Dada aho ka vonona hatrany ny hijoro sy hampaandroso ity firenenko ity @ izay kely tandrify ahy.
Vacance de la Présidence : Les CT pro-Ravalo ont boycotté le vote – See more at: http://www.midi-madagasikara.mg/politique/vacance-de-la-presidence-les-ct-pro-ravalo-ont-boycotte-le-vote#sthash.qMz8Jw3e.dpuf
Dia gaga @ ireto CT pro-Ravalomanana ireto aho fa raha manao boycott na hoe tsy mandray anjara anie ka izay mandray anjara ao no mandresy e. Maninona raha mandray anjara ka mandatsa-bato manohitra na mifidy. Sa tsy nisy azo fidiana mihitsy.
Tsy hidirako lalina satria tsy fotoanany intsony izao fa ireo CT sy CT pro-Ravalomanana ireo no tena tsy nahavita na inona na inona sy ratsy paik’ady ka tsy nahafan’ny filoha niverina …tsy hiverenako intsony iny resaka fa amiko dia tsy azo atao intsony itony boycott itony fa aleo manohitra. izaho mantsy tsy dia mankasitra ilay nidirana tao @ io tetezamita sandoka io fa rehefa niditra ihany dia mba mandatsaha vato manohitra ny pro-Rajoelina.
lalaorazafindrakoto dit :
Miarahaba ranavalona ,
Miala tsiny fa izaho vao nahita ny fanontanianao fa mbola tsy tara angamba ,hoe « aiza ity Bongolava ity » Andrefana lavitra ny Iarivo izy io ,Tsiroanomandidy no renivohitry Bongolava ,eo ampototr’i Bongolava io nitsenana an’i NENY io ,tanana honenany mpandrato sy ny mpanao dabokandro ,mpanankarena @ ny omby ,mbola bongolava daholo iny andrefana rehetra iny toy ny Ankavandra ,Morafeno be sy ny sisa ,raha hidina any dia mandalo an ‘ITASY ,arivonimamo ,analavory ,sakay .Io no faritra irery nanao TSIA tamin’ireny réferendum mampihomehy ireny .Misaotra naharitra namaky .
Précédent Article précédent : LALAO RAVALOMANANA : Nanome fanampiana ny Akany Arc en Ciel
Suivant Article suivant : LALAO RAVALOMANANA tao Analavory : Ho tohizantsika ny làlana nataon’i Dada